Ny smartphone 5G an'ny Honor dia ho tonga amin'ny faran'ny taona 2019 | Androidsis
Honor president dia nanambara ny smartphone 5G an'ny orinasa dia ho tonga amin'ny faran'ny taona
Ny zava-misy atolotry ny Honor olana amin'ny terminal anao miaraka amin'ny fakantsary tsy hita maso natsofoka tao amin'ny efijery Tsy midika izany hoe manana olana mitovy amin'ny finday finday 5G ianao. Raha ny marina dia voamarina aza ny daty famoahana azy.
George Zhao, ny filoha hajaina, no niandraikitra ny fanambarana sy fanamafisana izany ny fitaovana miaraka amin'ny fanohanan'ny tamba-jotra 5G dia ho tonga amin'ny telovolana farany 2019, izay amin'ity taona ity.
Ny fanambarana dia nomen'ny mpanatanteraka tamin'ny resadresaka nifanaovana izay natao tany Shanghai, Sina, ary noraketan'ny vavahady hamirapiratra. Tao no nanambarany ilay voalaza tetsy aloha, tsy misy antsipiriany misimisy momba ilay fitaovana.
Mifandraika, George Zhao dia niresaka momba ny "tahiry teknolojia manankarena" ananan'ilay orinasa amin'ny sehatra samihafa, toy ny amin'ny 5G, sary, faharanitan-tsaina artifisialy sy ny hafa. Matoky tena ny orinasa amin'ny fampiasana ireo haitao ireo hanamboarana fitaovana 5G tonga lafatra amin'ny faran'ity taona ity. Niresaka momba ny drafitry ny orinasan'ny Huawei hanatsara ny vola azony any ivelany aza ny 50% amin'ny vola miditra rehetra.
Tsara ny manamarika fa Huawei sy Honor dia efa nitombo 47,3% tamin'ny fotoana nilatsahan'ny tsenan'ny smartphone. I Honor dia lohalaharana amin'ireo marika hafa, miaraka amin'ny fanampian'ny fanavaozana vao haingana toa ny Ark Compiler hanatsarana ny fahombiazan'ny Android, ny fametrahana quad fakan-tsary ho an'ny sary tsaratsara kokoa, ary ny fanatsarana ny fiasan'ny Bluetooth miaraka amina faritra sy fahombiazana tsara kokoa.
Ireto ny maodely Huawei sy Honor 14 manaraka izay hahazo ny beta ho an'ny daholobe EMUI 9.1
raha mbola hitondra ny finday avo lenta 5G tara kelyAorian'ny orinasa maromaro, farafaharatsiny mba hanao izany amin'ity taona ity, zavatra ankasitrahana. Izy io dia hampiasaina amin'ny toetra sy ny masontsivana teknika mendrika terminal avo lenta, mifanaraka amin'ny vinavina efa misy eo amin'ny tontolo iainana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Honor president dia nanambara ny smartphone 5G an'ny orinasa dia ho tonga amin'ny faran'ny taona
Ny Google Photos dia manomboka manavao amin'ny alàlan'ny fampidirana maody maizina
Ahoana ny fomba hitehirizana tantara Facebook